शिल्पा र छविमा को ठीक ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
शिल्पा र छविमा को ठीक ?
यतिखेर नेपाली चलचित्र जगतमा नायिका शिल्पा पोखरेल र निर्माता छविराज ओझा निकै छाएका छन्। उनीहरू दुवैको नकारात्मक र सकारात्मक दुवै ढंगले विश्लेषण भइरहेको छ। दुवैजना सेलिब्रेटी भएको हुँदा चर्चा परिचर्चा हुनु स्वभाविकै हो। तथापि दुवैजना सही वा दुवैजना गलत हुन् भनेर मूल्यांकन गरिनु न्यायोचित हुँदैन। कुनै एक त गलत होला नै। यस परिवेशमा अर्की चर्चित नायिका रेखा थापाको मौनताले दोषी÷निर्दोषी छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ। रेखाले आफू ८ वर्षअघि नै छविसँग अलग भइसकेको हुँदा कुनै कमेन्ट नगर्ने भनेर पन्छिएकी छिन। जुन गलत हो।
यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा नै को गलत को सही भनेर पहिचान हुन सक्दैन। गु र गोबर बराबर ठान्नु गलत प्रवृृत्ति हो। रेखा किन छविसंँग अलग भइन्? के कारण थियो ? के रेखा पनि शिल्पाझैँ घरेलु हिंसाको कारण नै छविसँग अलग भएकी हुन त ?होइन छवि मायालु पति हो भने किन छविसँगै जिन्दगी बिताइनन् त ? होइन छवि परपीडक र हिंसक स्वभावका हुन् भने त्यो कुरा बताउन रेखा किन डराइरहेकी छिन् त ? सिने जगतमा बोल्ड नायिका भनेर चिनिने रेखाको मौनताले उनी कायर र न्यायका लागि सहयोगी नभएको ठहर्छ। छवि कस्ता स्वभावका मानिस हुन् भन्ने कुरा हेमा, गीताञ्जली, रेखा र शिल्पा जति अरुलाई थाहा हुने कुरा होइन।
शिल्पाको आरोप ठीक हो कि होइन भन्ने कुरा हेमा र रेखाले स्पष्ट बताउन सक्छन्। किनकि उनीहरूले छविको व्यवहार भोगिसकेका छन्। तर उनीहरूको मौनताले ठीक/बेठीक छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ। छविले सुरुमा हेमासँग विवाह गरे। जसबाट २ सन्तान जन्मिए। तर पनि हेमासँग बस्न सकेनन्। अनि गीताञ्जली सुनारसँग विवाह गरे। जसबाट अर्को एक सन्तान जन्मिए। गीताञ्जलीले आत्महत्या गरिन् रे। त्यो स्वाभाविक हो कि यातनाले गर्दा बाध्यताबस गरेकी हुन् ? अनुसन्धानको थप विषय भएको छ। त्यसपछि रेखासँग विवाह भो। त्यो पनि अन्त भो। फेरि शिल्पासँग विवाह भयो र त्यो
पनि विच्छेदको अवस्थामा पुग्यो। किन कोही पनि छविसँग टिकिरहेका छैनन् ? कहीँ उनको स्वभाव नै परपीडकको जस्तो भएर पो हो कि ?कसै कसैको स्वभाव नै अरुलाई दुःख दिने र मजा लुट्नेखालको हुन्छ। यदि छविको स्वभाव त्यही किसिमको हो र रेखा र हेमाले न्यायका लागि आफ्नो मुख खोल्दैनन् भने भोलि पुनः अर्की महिला छविको स्वभावबाट प्रताडित हुन पुग्छिन्।
गोकर्णेश्वर ८ काठमाण्डौँ
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०८:५० सोमबार
शिल्पा छवि रेखा